Chii Chinotapira Hat SEO? - SEO Basics Kubva Semalt
Munyika yeSeO (Search Engine Optimization), nyanzvi dzinonyevera pamusoro pengozi dze Black Hat SEO maitiro. Asi, chii chinonzi Black Hat SEO? Inoreva maitiro eSEO ari kuputsa Mitemo yeGoogle Webmaster. Seku injini yekutsvaga , Google yakagadzira mitemo ye webmaster yeSeO inobvumirwa uye izvo zvisingagoni kugamuchirwa mumutauro we SEO. Google inoshandisa injini yekutsvaga kugadzira chero mitemo yavanowana inobatsira uye kuputsa kwezvakataurwa zvinokonzera kusunurwa kwewebsite kubva kuGoogle. Somugumisiro, nyanzvi ipi neipi yeSEO inogona kukunda mitsva yekutsvaga injini, iyo isiri tsika yakaipa. Google ine chinangwa chekuwana chero nzvimbo yepaiti uye kunyatsotsanangura zvarinotaura kana kuti chii. Kunyange zvakadaro, bhizinesi reGoogle nderokuona mawebhusayithi akakodzera kutsvaga - how to create an infographic video.
Jack Miller, uyo Semalt Mutungamiriri Mukuru weVatengi vanobudirira, anotsanangura kuti kana muveki wekugadzira ane nzvimbo pamusoro pemaruva ehutongi, Google inokurudzira kugadziriswa kwemasayiti akadaro nemiti inotonhora yakafanana nemamwe mazwi.
Kazhinji, Black Hat SEO maitiro anosanganisira backlink schemes kana maitiro ekunyengera injini dzakadai seGoogle pakufunga nzvimbo kuti ive yakasiyana nezvinoitika. Izvi zvinotevera mienzaniso yeBlack Hat SEO:
Kutenga backlinks kana kuti zvimwe kupa mari yekubhadhara kweverlinks (kusanganisira kupa zvikwereti zvehutano)..
Shandisai mapiramidi - kuvaka zvibatanidzwa zvakawanda kupa zvipiro zvekare kumashure mamwe mawebsite.
Kuisa zvinyorwa zvakavanzika pane peji rebhundaneti, iyo inosanganisira magwaro maduku akabatanidzwa nemashoko makuru, masingaoneki mazwi uye zvinyorwa zvemavara akafanana nechekare.
Kuvaka mapeji emagedhi. Izvi zvinoreva zvikwangwani zvinotarirwa kutsvaga kutsvaga injini zvisati zvagadzirisa vashandisi kune mamwe mawebsite.
Kushandiswa kwevashandi veproxy kana kuti kubudisa mazita akawanda eIndaneti kuitira kuti webhusaiti ione semapeji akawanda ewebhu kuitira chinangwa chekuwana backlinks.
Kuverenga zvinyorwa kubva kune mamwe mawebhusayithi kuti zvive nenyengeri kuti site yakave nezvakawanda zvarudzo uye zviri mukati.
Ngozi dzeBlack Hat SEO
Pane zvipingamupinyi zviviri zvekuita muitiro we Black Black SEO. Mukutanga, Google iri kushanda pakuronga kwayo yekutsvaga kubvisa Black Hat SEO maitiro. Nyanzvi dzinoti Google yakatoita kubudirira mune izvi. Nokudaro, Black Hat SEO nzvimbo dzengozi dzinotadza kushandiswa.
Njodzi yechipiri uye yekupedzisira ine zvishoma zvingaitika kuitika asi ingozi yakakomba. Apo Google inotanga nzvimbo iyo inoita Black Hat SEO, vanogona kusarudza kuderedza zvakanyanya kusarudzwa kwepaiti kana kuti zvachose delist mapeji akadaro. A website yakashata haizomboratidzi kuGoogle rankings zvachose.
Kubatsira kwe White Hat SEO Practices
Nzvimbo inogona kuvaka musimba nesimba kuburikidza nekutsvaga nguva mu White Hat SEO maitiro anogamuchirwa nemichina yose yekutsvaga. Shanduro ichasimudzirwa kuongorori zvishoma nezvishoma asi ichachengetedza nzvimbo dzakagadzirwa. Sangano reSeO rinogonawo kuvaka kubva pane zvekare SEO maitiro panzvimbo yekutanga zvakare nguva dzose. Pakupedzisira, nzvimbo inogona kusvika kune imwe nhamba yepamusoro yezvitsvaga zvekutsvaga kwehupenyu uye kuisa pfungwa pane kuchengetedzwa kweSEO. Uyezve, kuchengetedza nzvimbo yakakwirira (inowanikwa zvakajeka) ibasa rakaoma kwazvo kupfuura kugona kusarudzwa munzvimbo yekutanga.